Polisin’i Yangon sy ny vondrona ‘nasionalista’ nanaparitaka an-kerisetra ny diaben’ny fandriampahalemana tao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2018 5:11 GMT
Nokarakaraina ny diaben'ny fandriampahalemana mba hanasongadinana ny manjo ireo mponina nafindra toerana noho ny fifandonana misy ankehitriny eo amin'ny tafiky ny governemanta sy ny vondrona ara-poko mitam-piadiana. Sary avy amin'i Aung Kyaw Htet. Ny Irrawaddy dia mpiara-miasa amin'ny Global Voices ara-botoaty.
Naparitaky ny polisy sy ny vondrona sivily nasionalista tamin'ny fomba feno herisetra ny diaben'ny fandriampahalemana tao Yangon, renivohitr'i Myanmar tamin'ny 12 Mey 2018.
Nokarakarain'ny Komitin'ny Hetsi-bahoaka Milamina ny diabe, natrehin'ny olona efa ho 300. Natao hanaitra amin'ny manjo ireo olona nafindra toerana anatiny manerana ny firenena izany noho ny fifandonana mihamafy ankehitriny misy eo amin'ny tafiky ny governemanta sy ny vondrona ara-poko mitam-piadiana. Mifampiraharaha fandriampahalemana amin'ireo vondrona ara-poko mitam-piadiana isan-karazana nanangana ady nandritra ny taompolo maro ankehitriny ny governemanta.
Nolavin'ny polisy ny fangatahan'ny mpikarakara hanao fihetsiketsehana ao amin'ny arabe fihaonan-dalana feno olona any Yangon, noho izany dia nanaiky hiparitaka am-pilaminana izy ireo. Saingy araka ny filazan'ireo mpikatroka, olona efa ho zato manao akanjo sivily tamin'io fotoana io no nanafika ny diaben'ny fandriampahalemana, ary nidaroka azy ireo sy nisambotra ny sasany tamin'ireo mpandray anjara mihitsy aza, nisosa teo imason'ny polisy izany rehetra izany.
Mpanao gazety sasantsasany tao amin'ny fihetsiketsehana no nahita fa mpanohana ny tafika sy ny Fikambanana miaro ny Foko sy ny Fivavahana (Ma Ba Tha), vondrona Bodista nasionalista ireo mpanafika.
Mpikambana 9 avy amin'ny diaben'ny fandriampahalemana no nosamborin'ny polisy noho ny fanitsakitsahana ny Lalàna mifehy ny Fivoriana Milamina sy ny Diabe Milamina. Noafahana izy ireo rehefa nandoa onitra tamin'io andro io ihany. Saingy nilaza ny polisy fa hametraka fitoriana misimisy kokoa amin'ny olona 17 noho ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka.
Tsy misy ny tatitra raha hitory ny vondrona “nasionalista” tsy manaja fitsipika ny mpitandro filaminana.
Vondrona fiarahamonim-pirenena sivily efa ho 400 no nanasonia fanambarana manameloka ny fanaparitahana an-terisetra ny diaben'ny fandriampahalemana. Niangavy ny manampahefana izy ireo mba hanatsoaka ny fiampangana ireo mpikatroka ary “handray fepetra amin'ireo izay nanao hetsika mahery setra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana.”
AAPP calls on the Gov. to immediately release and drop all charges against protesters detained during the 12 May peaceful anti-war protest in Yangon. This is a clear and calculated attack on freedom of expression and right to assembly. #Burma#Myanmar
Miantso ny Fitondrana ny AAPP mba hanafaka sy hanafoana tsy misy hatak'andro ireo fiampangana rehetra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana voatazona nandritra ny hetsi-panoherana am-pilaminana tamin'ny 12 Mey tao Yangon. Fanafihana mazava sy nomanina hamelezana ny fahalalaham-pitenenana sy ny zo hivory izany.
Ny AAAP dia Fikambanana Fanampiana ho an'ny Gadra Politika-Birmania.
Samy namoaka fanambarana ihany koa ny ambasadin'i Danmark sy Soeda, mitaky ny governemanta hanohana ny zon'ireo vahoaka hivory am-pilaminana sy haneho ny heviny.
Nosamborina nandritra ny diaben'ny fandriampahalemana ireo mpikatroka sivy. Sary avy amin'i Aung Kyaw Htet. Ny Irrawaddy dia mpiara-miombon'antoka amin'ny Global Voices ara-botoaty.
Tamin'ny lahatsoratra fanadihadiana, nitaraina noho ny tsy fahavitan'ny polisy hisambotra ireo ‘nasionalista’ izay nanafika ny diaben'ny fandriampahalemana ny tranonkalam-baovao The Irrawaddy, izay mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Global Voices ara-botoaty:
Manontany ny manampahefana izahay hoe: Iza ireo milaza tena fa “olom-pirenena” ireo? ary nahoana ny manampahefan'ny polisy nanatrika teo no tsy mahita rehefa nanafika izy ireo? Ankoatra ny fanafihana ara-batana ireo mpikatroka, nanozona sy nandrahona ireo mpitati-baovao izay tao mba hitantara ny hetsi-panoherana ireo vahoaka tsy fantatra anarana ireo. Mbola tsy niraharaha izany ihany ny polisy.
Nahoana ireo jiolahimboto ireo no misitraka tsifisaziana? Nahoana no nijoro fotsiny ny polisy ary namela azy rehetra handravarava? Nanapa-kevitra ny mody tsy nahita ve ny polisy satria mpikatroka mpomba ny miaramila izay “manohitra” ny hetsi-panoherana ny ady izy ireo?
Nanao fanairana ihany koa ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona noho ny fitomboan'isan'ny fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpikatroka fandriampahalemana. Manodidina ny 42 ireo mpikatroka fandriampahalemana, tahaka ireo mpianatry ny lisea, voadaroka tamin'ny tranga isan-karazany noho ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika faobe manerana ny firenena tamin'ny volana mey fotsiny.
Mikasa hitory ny polisy sy ny “nasionalista” izay nanaparitaka azy ireo tamin'ny 12 Mey ny mpanao hetsi-panoherana.
Ho azy ireo kosa, nandà fa tsy nanakarama ‘jiolahimboto’ sivily mba hisambotra mpikatroka ny polisy.